Ogaden News Agency (ONA) – HAAB oo maanta ka soo dagay garoonka diyaaradaha magaalada Port Elizabeth
HAAB oo maanta ka soo dagay garoonka diyaaradaha magaalada Port Elizabeth
Posted by ONA Admin	/ December 6, 2012
Hogaanka Abaabulka iyo Arimaha Bulshada mudane Sheikh Maxamed Yaasiin (Diirane) ayaa maanta ka dagay garoonka diyaaradaha magaalada Port Elizabeth oo ah xarunta Gobolka Eastern Cape, islamarkaana ah xarunta Jaaliyada Ogadeniya ee Koonfunta Afrika.
Waftiga uu hogaaminaayo hogaanka HAAB oo dhawaanahanba ku sugnaa wadanka Koonfur Afrika ayaa waxaa weheliyay oo ku soo dhaweeyay magaalada Johannesburg madaxa HAAB ee Jaaliyada Ogadeniya ee Koonfur Afrika Halgame Daahir Axmed ”korneyl Cadde” .
Wafdigan waxaa siwanaagsan u soo dhaweeyay masuuliyiin ka tirsan Jaaliyada S.Ogadeniya oo uu horkacaayay gudoomiyaha Jaaliyada Halgame Bashiir Muxumed.
Mudane Sheikh Maxamed Cabdi Yaasiin ayaa shirar waaweyn horey ugu soo qabtay magaalada Johannesburg, Pretoria iyo magaalooyin kale oo wadanka ka mida ah. Hogaanka ayaa shirkiisa ugu horeeya ku qaban doona magaalada Uitenhage maalinta Jumcaha ah oy taariikhdu tahay 07/12/12 waxaana la rajaynaya inay dad badani ka faa’iidaysan doonaan oo halganka muddo dherr ku soo jiray Gudaha iyo dibaddaba ka soo hawlgalay. Waa ruug cadaa ku xeeldheer arimaha halganka iyo xaaladaha Geeska Afrika ee murugsan gaar ahaan Ogaadeniya, goob joogna ka ahaa 3xdii halgan ee qori iskudhiibka ahaa ee jabhada ONLF ay hadda hormuudka ka tahay, oo uu maanta kamid yahay madaxdeeda.
Kala soco wararkeena danbe abaabulka iyo kulanada dhicidoona hadii Eebe idmo.